ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတဲ့ လမ်းပျောက် လူငယ်များ အတွက် - ၄ - Saya Zin
၄ ။ ဘဝ တွေ … ဘဝ တွေ …
ထုံးစံအတိုင်း ညီလွင် ကျွန်တော့် ဆီ ရောက်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ စကားဝိုင်းလေး ဆက်ဖြစ်ပြန်တယ်။ ” အကို တခြားရော အကြံပေးချင်တာ လေးတွေများ ရှိသေးလားဗျ ။ အကို့ ဆီက ရသလောက် ယူသွားချင်လို့ပါ ။ “
” ဟားဟား ။ ညီကတော့ လုပ်ပြီ ။ ယူသွားရအောင် အကို့ဆီက ပဲ့ပါသွားတာမှ မဟုတ်တာကွာ ။ ရပါတယ် ။အကို ပြောချင်တာလေး တစ်ခုတော့ ရှိသေးတယ်ကွ ။ ညီ ပြန်သွားချိန်မှာ စဉ်းစားနေရင်းနဲ့မှ ခေါင်းထဲမှာ တဖြည်းဖြည်း ပြန်ပေါ်လာတာပေါ့လေ ။ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုပေါ့ ။ အယူ အဆ တစ်ခု ဆိုတာထက် နည်းစနစ် တစ်ခု လို့ဆိုရင် ပိုပြီး မှန်နိုင်မယ် ထင်တယ်ကွ ။ “
” လုပ်ပါ အကို ။ ဘယ်လို နည်း စနစ်မျိုးလဲ ? ကျွန်တော် လည်း ခေါင်းသိပ်မစားဘဲ အလွယ်တကူ လိုက်လုပ်လို့ရတာပေါ့ ။ “
” အင်း အကိုလည်း အဲလို ယူဆလို့ ဒီ နည်းစနစ်ကို ပေးတာပါ ။ ဒါပေမယ့် ညီ မှတ်ထားဖို့က နည်းစနစ်တွေဆိုတာ နောက်ခံ အယူအဆလောက်မခိုင်မာဘူးနော် ညီ ။ ပိုပြီး ကောင်းတာတွေ ပိုပြီး ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတာတွေ အသစ်အသစ်အနေနဲ့ ထပ်ထပ်ပြီး ရှိလာနေဦးမှာပဲ ။ ဒီတော့ ဒီနည်းစနစ်လေးကိုလည်း ညီ့ အနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ရတယ် ဆိုတာထက် ဘာကြောင့် လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို သေချာ စဉ်းစား ကြည့်စေချင်သေးတယ် ။ “
” ဟုတ်ကဲ့ပါ အကို ။ ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ် ။ “
” ဒီလို ညီရ ။ ဒီ နည်းစနစ်လေးကို မပြောခင် ညီ့ ကို အကို မေးခွန်းတစ်ခု အရင်မေးကြည့်ချင်တယ် ။ ရမလား ? “
” ဟုတ် မေးလေ အကို ။ ထူးထူးခြားခြား အကိုက ဘာမေးမလို့လဲ ? “
” ညီ အခု ဘာဖုန်းကိုင်ထားလဲ ကွ ။ “
” Huawei လေ အကို ။ Model သိပ် အမြင့်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ “
” အေးပါ ။ အဲဒါက သိပ် အရေးမကြီးပါဘူး ။ အကို မေးချင်တာက မင်းသာ အခုအချိန်မှာ ဖုန်း အသစ်တစ်လုံးရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ဖုန်း မျိုး လိုချင်လဲ ။ ? “
” အာ အကိုကလည်း ပြောနေစရာ လိုသေးလို့လား ? iPhone ဒါမှမဟုတ် Samsaung ပေါ့ဗျာ ။ “
” ဟုတ်လား ? ဘာလို့ အဲဒီ ဖုန်းတွေကို လိုချင်ရတာလဲ ညီရ ။ “
” အဲ့ဒီ ဖုန်းတွေက Brand ပိုမြင့်တယ်လေ အကိုရာ ။ ကိုင်လိုက်တာနဲ့ လူတိုင်း အထင်ကြီး သွားစေနိုင်တယ် ။ ပြီးတော့ Functions တွေလည်းပိုစုံတယ် ။ အသံ ကွာလတီ ၊ ရုပ်ထွက် ကွာလတီ တွေလည်း ပိုကောင်းတယ် ။ iPhone ဆိုရင် ဒီဇိုင်းက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကို လှနေတာ မျိုး ။ “
” အင်း ဟုတ်ပြီ ညီ ။ ဒါဆို အကို နောက် တစ်ခု ထပ်မေးမယ်နော် ။ ညီ တကယ်လို့များ ကား တစ်စီး အသစ်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ကားမျိုး လိုချင်လဲ ညီရ ။ “
” ကား ? အကိုကလည်း ကျွန်တော့် က ကားနဲ့မှ မနီးစပ်တာ ။ ရရင်တော့ လိုချင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ ဘယ်လိုမှ ဆိုတာမျိုးတော့ မပြောတတ်ဘူး အကိုရ ။ ဇိမ်ကျမယ့် ကား ၊ လူ အထင်ကြီးခံရမယ့်ကား မျိုးပေါ့ဗျာ ။ ဒါမျိုး လိုချင်တာပေါ့ ။ “
” အေးပါ ဟုတ်ပါပြီ ။ ဒါဆို တစ်ခုလောက် ပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းညီ ။ အခုနက ညီ့ကို အကို ဘာဖုန်းအသစ်လိုချင်လဲ လို့ မေးတုန်းက ညီ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ တိတိကျကျ Brandname နဲ့ ပြောနိုင်တယ် နော် ။ ကားကျတော့ ညီ အဲလို မပြောနိုင်တော့ဘူး ။ အဲဒါ ဘာကွာ နေလို့ လို့ ထင်လဲ ညီ ။ “
ကျွန်တော် ပြုံးရင်း မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကို ညီလွင် သေသေချာချာ မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး စဉ်းစားပါတယ် ။ နောက်တော့ …
” ဒါက ဒီလို ထင်တယ် အကိုရ ။ ဟုတ်လားတော့ မသေချာဘူးနော် ။ ကျွန်တော်က လက်ရှိ ဖုန်း ကိုင်ထားတယ် အကိုရာ ။ နေ့တိုင်းလည်း သေချာ သုံးဖြစ်တယ် ။ ဒီတော့ ကျွန်တော့် ဖုန်းရဲ့ ကောင်းကွက် ဆိုးကွက်တွေကို ကျွန်တော်သိတယ် ။ ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် မဝယ်နိုင်လို့ မဝယ်ဖြစ်သေးရင်တောင် အွန်လိုင်းမှာ ၊ ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖုန်း ကြော်ငြာတွေ တွေ့ရင် သတိထားပြီး ကြည့်ဖြစ် ဖတ်ဖြစ်တယ် ။ ဒီတော့ အကို ကျွန်တော့် ကို ဘာဖုန်းလိုချင်လဲ မေးလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော် သိပ် အပင်ပန်းခံပြီး မစဉ်းစားလိုက်ရဘူး ။ သူ့ အလိုလို ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတယ် ။
ကားကျတော့ အဲလို မဟုတ်ဘူး ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း လက်ရှိ ရှိမနေတော့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက်တွေ ဘာမှမသိဘူး ။ ကားကြော်ငြာတွေ တွေ့ရင်လည်း သာမန်လောက်ပဲ ကြည့်မိပြီး ကျော်သွားလိုက်တာပဲ ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာ ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှ ရှိမနေဘူး ။ ဒါကြောင့် အကို ဘယ်လို ကားမျိုး လိုချင်လဲ လို့မေးတော့ ကျွန်တော် သေချာ မဖြေနိုင်တာပဲ အကို ။ “
” အား ပါး ။ ကောင်းလိုက်တာ ညီ ။ ညီ စဉ်းစားပုံ အတော်လေး ကောင်းနေပြီ ။ ဟုတ်တယ် အကို ပြောချင်တာ အဓိ က က အဲ့ဒါပဲ ။ ဖုန်း အကြောင်း မေးလိုက်ချိန်မှာ ညီ သေသေချာချာ ဖြေနိုင်တာက အရင်ကတည်းက ညီ ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် အာရုံ ရှိနေလို့ ။ ကားကိုကျတော့ ညီ့ စိတ်ထဲမှာ အဲလောက် အာရုံရှိမနေတော့ ညီ သေသေချာချာ မဖြေလိုက်နိုင်ဘူး ။ ဒီကနေ ဆန့် တွေးကြည့်စမ်း ညီ ။ ဘဝ တွေ ကိုရော ညီ ဘယ်လောက် အာရုံ စိုက်ခဲ့မိဖူးလဲ ။ “
“ ဘယ်လို အကို ၊ ဘဝ တွေ …. ဟုတ်လား ? ဒါတော့ နေ့တိုင်း ကျွန်တော် တို့ ကြုံနေရတာပဲလေ ။ ဘယ်လို အာရုံစိုက်စရာ လိုသေးလို့လဲ ? “
” ကား လိုပေါ့ညီ ။ ညီ နေ့တိုင်း တွေ့နေတာပဲလေ ။ ဒါပေမယ့် ညီ အာရုံသေချာ မစိုက်ထားမိတော့ ဘာကို လိုချင်မှန်း ညီ မသိဘူးပေါ့ ။ အဲလိုပဲ ဘဝတွေကို ညီ နေ့တိုင်း တွေ့နေ ရပေမယ့် သေချာ အာရုံ မစိုက်မိရင် ဘယ်လို ဘဝမျိုးကို လိုချင်လဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိနိုင်ဘူး ညီ ။ “
” ကျွန်တော် အကို ပြောချင်တာကို သဘောတော့ ပေါက်လာပြီ အကို ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကျွန်တော့် ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဆိုတာက သေသေချာချာသိချင်ရင် ကျွန်တော် နေ့စဉ် ထိတွေ့နေတဲ့ ဘဝ တွေကို အရင်ကထက် ပိုပြီး အာရုံ စိုက်ရမှာပေါ့ ။ “
” ဟုတ်တယ် ညီ ။ ညီ လုပ် ရမှာ ဒါပဲ ။ သာမန် ထက် စူးရှ တဲ့ အာရုံစိုက်မှုမျိုးနဲ့ ဘဝတွေကို ညီ လိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့ လေ့လာနိုင်ဖို့ လိုတယ် ။ ဒါမှ ညီကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လို ဘဝ မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လဲ ဆိုတာ သိမှာ ။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ချက် ညီ ဖုန်း နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဖုန်း ကြော်ငြာတွေမှာ သူ့ရဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ် အသီးသီး အလိုက် ဘာတွေ ဘယ်လို ဖွဲ့စည်းထားတယ် ။ ဘာတွေ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သတိထားကြည့်မိတယ် မလား ? အဲဒီ လိုပဲ ဘဝတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ သူတို့ ဘဝတွေကို ဘာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ် ။ ဘာတွေ လုပ်နေကြတယ် ။ လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတာတွေကို ညီ သတိထားကြည့်ရမှာ ညီ “
” ဒါပေမယ့် အကိုရ ဖုန်းလိုမျိုး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးပေးထားတာမှ မဟုတ်တာ ။ ကျွန်တော် က တစ်ယောက်ချင်းကို အဲလို လိုက်မေးရမှာလား ? “
” မဟုတ်ဘူး ညီရ ။ ညီ့ အနေနဲ့ အဲလို လိုက်မေးချင်လည်း ရတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက လူတွေက တစ်ခါတလေ ကိုယ့် ဘဝ အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်တောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်တာမျိုးရှိတယ် ။ အဲလို မဟုတ်ဘဲ သေချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရရင် ၊ သေသေချာ ချာ စကားပြော မေးမြန်းခွင့်ရရင်တော့ ညီ ကံကောင်းတာပေါ့ ။ အဲလို မဟုတ်ရင်လည်း တခြား နည်းလမ်းရှိတယ် ညီရ ။ ညီ ဖုန်း မော်ဒယ် တွေ အကြောင်းကို ဘယ်က သိရလဲ ? ဖုန်း ဆိုင်တွေ တစ်ဆိုင်ဝင် တစ်ဆိုင်ထွက် လိုက်မေးရလား ? ဖုန်းကို ကိုယ်တိုင် ကိုင်ကြည့်ရမှ ဒါတွေကို သိရတာလား ? “
” ဒီလို တော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ အကိုရ ။ ဂျာနယ်ထဲမှာ အင်တာနက်ထဲမှာ ပါတာတွေကို အဓိက အရင် ကြည့်တာပေါ့ ။ “
” အေး အဲလို ပဲပေါ့ ညီ ။ ဘဝ တွေ အကြောင်း သိရဖို့လည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ ၊ ဂျာနယ်တွေ ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ မှာ ၊ စာအုပ်တွေထဲမှာ လိုက်ရှာပေါ့ညီ ။ ညီ သေချာ သတိထားပြီး ဖတ်ရင် ဖတ်သလောက် ဘဝတွေ အကြောင်း ပိုသိလာမှာပဲ ။ အဲဒီ အချိန်မှာ ညီ့ အနေနဲ့ ဘယ်လို ဘဝ မျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကို အရင်ကထက်ပိုပြီး သိလာမှာပဲ ။ ဘဝ မော်ဒယ် ပုံစံတွေကို လိုက် ကြည့်သလိုပေါ့ ။ “
” အကို ပြောတာ သဘောပေါက်ပြီ အကို ” ညီလွင်က အားတက်သရော ပြောပါတယ် ။
” အဲလို ကြည့်နိုင်ဖို့ရာမှာ အကို ဦးစားပေးစေချင်တာက သာမန်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တစ်ခန်းရပ် ဆောင်းပါးလေးတွေထက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပိုသိရနိုင်တဲ့ အတ္ထုပတ္တိ စာပေမျိုးကို ဖတ်စေချင်တယ် ။ တစ်အုပ်လုံး ကို သေသေချာချာ အချိန်ယူပြီး ရေးထားတာမျိုးတွေပေါ့ ။ ဒါမှ ကိုယ်က အဲ့ဒီ ဘဝ တစ်ခုရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို သေသေချာချာ သိရမှာ ။
ဂန္ဒီ ကြီး အကြောင်း ဖတ်မလား ? ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း ဖတ်မလား ?
Martin Luther King အကြောင်း ဖတ်မလား ? ဦး သန့် အကြောင်း ဖတ်မလား ?
နည်းပညာ ဘက် နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားရင် Steve Jobs အကြောင်း ဖတ်မလား ?
အားကစား စိတ်ဝင်စားရင် Ferguson အကြောင်း ဖတ်မလား ? စသဖြင့်ပေါ့ ။
သုတပိုင်းရော ရသပိုင်းပါပေးနိုင်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖတ်သွားလို့ရတဲ့ မြန်မာ စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပတ္တိ တွေ လည်း ရှိတာပဲ ။ ဆရာ သာဓု တို့ ၊ ဆရာ ရွှေဥဒေါင်း တို့ ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပတ္တိ တွေလိုပေါ့ ။ တစ်အုပ်လုံးကို လူတစ်ယောက်တည်း အကြောင်း အဓိကရေးထားတာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင် အတ္ထုပတ္တိ အတိုလေးတွေ စုပြီး ထုတ်တဲ့စာအုပ်မျိုးတွေ ၊ နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ အောင်မြင် နေသူတွေကို မေးထားတဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ဖတ်တာကလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ အကျိုးရှိတာပါပဲ ။
ဒီလူတွေရဲ့ ဘဝ ပုံစံတွေကို ဖတ်ရင်း ကိုယ် ကြိုက်တာလေးတွေယူပေါ့ ။ မကြိုက်တာဆိုရင်တော့ ပယ်ပေါ့ ။ ဒီနေရာမှာ သတိထားစရာတစ်ခုရှိတာက ဘဝ ပုံစံကို ရွေးတဲ့အခါ ဖုန်းရွေးသလို ညီ့ အနေနဲ့ တစ်လုံးလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ ရွေးလိုက်ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး ညီရ ။ ညီ ဖတ်မိ လေ့လာမိတဲ့ လူတွေမှာ ကိုယ်စီ အားသာချက်တွေ ၊ ညီ နှစ်သက်တာတွေ ရှိသလို ၊ အားနည်းချက်တွေ ညီ မနှစ်သက်တာတွေလည်း ရှိနိုင်တာပဲ ။ တစ်ခါတလေ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်ကို ကိုယ်က မနှစ်သက်တာမျိုး တောင် ရှိနိုင်တာပဲ ။
ဥပမာ အကို ဆိုရင်ကွာ အရင်က Steve Jobs ကြီးကို အရမ်းသဘောကျတယ် ။ နောက်တော့ Steve Jobs ကြီး အကြောင်းကို စာအုပ်တွေ ၊ Documentary Films တွေ ကနေ တဆင့် လေ့လာကြည့်မိပြီးတဲ့အခါ မကြိုက်တဲ့ အချက် တစ်ချို့ ကို သွားတွေ့ရတယ် ။
သူ့ ရည်းစား ကိုယ်ဝန်ရတာကို ( စထောင်ကာစမို့လို့ ) အာရုံနောက်မခံဘဲ ငါနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပေါ့ လို့ ဆက်ဆံခဲ့တာတွေ
သူ့ သူငယ်ချင်း Steve Wozniak < တကယ် Apple ရဲ့ Personal Computer ကို စတင်တီထွင်သူ > အပေါ်မှာ ပရောဂျက် အသေးလေးတစ်ခုမှာတောင် ရိုးရိုးသားသားရသမျှကို ခွဲဝေမပေးဘဲ ကြားထဲ က သူက ပိုယူလိုက်တာတွေ
နောက်တော့ အောင်မြင်လာတော့လည်း Apple မှာ ဒီ သူငယ်ချင်းရဲ့ နေရာက သာမန်လောက်ပဲ ရှိပေမယ့် သူကတော့ တောက်လျှောက် အရမ်းကို ထောင် တက် လာတာတွေ ၊ < အခုအချိန်အထိ လူအတော်များများက Steve Jobs ကိုသိပေမယ့် Steve Wozniak ကို မသိကြဘူးလေ ။ >
သူ အရင်းအနှီးအရပဲ အဓိက ဝင်ပါလိုက်တဲ့ Pixar Company ရဲ့ Toy Story ဇာတ်လမ်းလို ဟာမျိုးမှာတောင် သူ့ကိုပဲ အဓိက သတိထားမိအောင် နေရာယူလွန်းတတ်တာတွေ
လူတွေအပေါ်မှာ အရမ်းကို ဖိအားပေးပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားဆက်ဆံလွန်းတာတွေ
လူတွေကို လိုရင် လိုသလို အသုံးချဖို့ကို အကောင်းဆုံး ချဉ်းကပ်တတ်ပြီး ရသမျှ အစွမ်းအစကို ဖိအားပေးပြီး ညှစ်ထုတ် ၊ ပြီးတော့ အသုံးသိပ်မလိုတော့ဘူးဆိုရင် ချောင်ထိုးထားပြီး လှည့်တောင်မကြည့်တော့တာတွေ စသဖြင့်ပေါ့ကွာ ။
တစ်ချို့ အကို မကြိုက်တဲ့အချက်တွေက သူ့ကို အဓိကအောင်မြင်စေတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာပဲ ။ သူ့ရဲ့ အားသာချက်လို့ ပြောလို့ရတာပဲ ။ ဒါပေမယ့် အကို မကြိုက်တော့ မယူဘူးပေါ့ ။အကို ကြိုက်တဲ့ အပိုင်းပဲ ယူတာပေါ့။ အကို အရင်က ပြောဖူးပါတယ်။ သစ်သီး တစ်လုံး ပိုးထိုးနေရင် ပိုးထိုးနေတဲ့ အခြမ်းဖယ်စားဖို့ ပေါ့ ။
ဒီလိုမျိုးပဲ ညီ့ အနေနဲ့ ကြိုပြီး စဉ်းစားထားသင့်တယ်ညီ ။ ညီလည်းသိပြီးသားပါ ။ လူဆိုတာ ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံတယ်ရယ်လို့ မရှိဘူးလေ ။ ဒီတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပုဂိုလ်ရေး အလွန်အကျွံ မကိုးကွယ်မိတာ ကောင်းတယ် ။ သူတို့ကို ကိုယ့်အတွက်အားတက်စရာ ၊ အားယူစရာ လို့ သဘောထား ။ တသွေမတိမ်း တော့ လိုက်အတု မခိုးနဲ့ ။ သူတို့ အကြောင်းကို ကိုယ့်ခံယူချက် ၊ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး ကိုယ့် ရဲ့ တကယ့် ဘဝကို ကိုယ့် အတွင်းမှာပဲ ပြန်ရှာရမှာ ညီ ။ ဒီလောက် ဆိုရင် ညီ အကို ပေးချင်တာကို ရမှာပါ ။ “
” ဟုတ်ကဲ့ ရပြီ အကို ။ ကျွန်တော် ရှင်းသွားပြီ ။ အကို ပြောသလို လူတွေရဲ့ ဘဝတွေကို သာမန်မဟုတ်ဘဲ အာရုံစိုက်ပြီး လေ့လာမယ် ။မေးမြန်းစူးစမ်းမယ် ။ လူတွေအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ ၊ အင်တာဗျူးတွေ ၊ အတ္ထုပတ္တိ တွေ ဖတ်ပြီး လေ့လာမယ် ။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်တာကို ယူ ၊ မကိုက်တာကို ပယ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝ ပုံစံ တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူမယ် အကို ။ ကျေးဇူးပါ အကို ။ ဒီ နည်းစနစ်လေး ကျွန်တော့် ကို ပြောပြတဲ့အတွက် ။ “
ညီလွင် တစ်ယောက် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ကျွန်တော့်ကို အခုလို ပြန်ပြောတဲ့ အခါ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ သူ တစ်ခုခုတော့ ရသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်နေမိပါတယ် ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သူ သူ့ကိုယ်သူ သေချာပေါက် ရှာတွေ့မှာပါ ။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူ့ကို ဆွေးနွေးအကြံပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ပြန်ရှာရပါဦးမယ် ။
တကယ် တမ်းတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာဖွေရတယ်ဆိုတာ ရပ်တန့်သွားလို့ရတဲ့ အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလေ ။
ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ ၊ ဘဝဟာပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး နေပျော်လေ ဖြစ်လာတာကိုး ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာတွေ့နိုင်ကြပါစေဗျာ ။
” ပန်းတိုင် တွေ့၍ တွေ့သော ပန်းတိုင် အရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ “
လူငယ်တွေကို ဒါကိုဖတ် ဒါကို အသေမှတ် ဆိုတာမျိုး မပေးချင်လို့ သေသေချာချာ နားလည် သဘောပေါက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ရေးလိုက်တဲ့ အခါ ဒီ စာစုဟာ အတော်လေး ရှည်သွားရပါတယ် ။ တကယ်တမ်းတော့ ဒီ ကိစ္စဟာ ဒီထက် ပိုရှည်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာပါ ။ လူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ သူ့ ဘဝ ရှေ့ခရီးအတွက် ဘာကို ရှေ့ဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ဒီလောက် ဆောင်းပါးလေးဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုပဲ အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်တယ်လို့ပဲ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ခံယူမိပါတယ် ။ တကယ်တမ်းတော့ ဒီ စာစုဟာ ကျွန်တော့် ဘဝမှာ လုံးချင်း စာအုပ် တစ်အုပ် အနေနဲ့ ရေးထုတ်ဖို့ အိပ်မက် မက်နေခဲ့တဲ့ စာအုပ်ထဲက အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ပါ ။
ကျွန်တော့်စာကို စောင့်ဖတ်နေသူ လူငယ်တွေများရှိခဲ့ရင် စောစောသိ စောစောအသုံးချနိုင်အောင်လို့ ဒီ စာစု ကို အရင်ဆုံး ရေးပေးလိုက်ဖြစ်တာပါ ။ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေဦးမှာပါ ။ ဖြည့်စွက် စဉ်းစားပါ ။ မွန်းမံ တည်းဖြတ်ကြပါဗျာ ။ စာဖတ်သက် နည်းနေသေးသူ လူငယ်တွေ အတွက် လိုရင်းတိုရှင်း မှတ်လို့ရအောင် ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ထဲက အဓိက အချက် ၄ ချက် ကို ပြန်လည် စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
လူငယ် တစ်ယောက် အနေနဲ့ သူ့ ဘဝ ရှေ့ခရီးအတွက် ဘာကို ရှေ့ဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဒီ အချက် ၄ ချက် ကို အသုံးချပြီး စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် ။
၁။ ကိုယ် ဘာ ကို ဝါသနာပါလဲ / ဘယ် အလုပ်ကို စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်နိုင်လဲ ဆိုတာကို သေချာ မြင်အောင် ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကြောက်နေ တွန့်မနေပါနဲ့ ။ ကိုယ့် ဝါသနာ အစစ်ကို သာ တွေ့အောင်ရှာပြီး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ ။
၂။ ဝါသနာကို ရှာမတွေ့သေးတဲ့အခါ မျော မနေပါနဲ့ ။ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက် ဖြစ်တာတွေကို ရှာဖွေပါ ။ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို အကြံပြုခိုင်းပါ ။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက် လုပ်စရာရှိတာတွေကို လုပ်နေရင်းနဲ့မှ ဝါသနာကို ဆက်ပြီး ရှာနေပါ ။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးနဲ့ လိုက်ဖက် မယ့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါ ။ ကိုယ် က လူငြိမ် လား ? လူ လှုပ် လား ? ဒါနဲ့ ကိုက်တာကို ရွေးပါ ။
၄။ တခြား လူတွေရဲ့ ဘဝ လူနေမှု ပုံစံတွေကို လေ့လာပါ ။ ဒါမှ ကိုယ့်မှာ အားကျစရာ စံ တစ်ခု ရှိနေမှာပါ ။ လူတစ်ယောက် ကို အရူးအမူး လိုက် အတု မယူဘဲ လူတိုင်း လူတိုင်းဆီက ကောင်းတယ်လို့ ထင်တာ၊ ကိုယ် နဲ့ သင့်တော်မယ်လို့ ထင်တာကို ရအောင်ယူပါ ။ မကောင်းတာကိုပယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ ။
လူငယ်တွေ အနေနဲ့ မိမိဘဝ တိုးတက်ဖို့ အတွက် ဘာလုပ်သင့်လဲ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ခေတ်က ဘာကို တောင်းဆိုလာသလဲ ? ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုး ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးတွေ ခေတ်စားလာမှာလဲ ? ဆိုတာကို မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာတာဟာလည်း လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ် တစ်ခုပါ ။
ဒါပေမယ့် ဒီ အလေ့အကျင့်ဟာ မိမိကိုယ် မိမိ သိဖို့ လောက် < စိတ်ချမ်းသာစွာ အောင်မြင်ဖို့မှာ > အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်လို့ ဒီ စာစုမှာ ချန်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်း အတော် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပြီး အချိန် နဲ့ အမျှလည်း ပြောင်းလဲ နေနိုင်လို့ပါ ။ နောင်မှပဲ သီးသန့် ဆောင်းပါး များနဲ့ ထပ်မံ မျှဝေပေးပါ့မယ်ဗျာ ။ )